SomaliaReport: Hoggaamiyaha Al-Shabaab Shangole oo Nool
Masuulka sare ee dhaqdhaqaaqa al-Shabaab, Fuaad Maxamed Qalaf (Shangole) oo ay ciidamada dawladdu sheegteen dilkiisa horaantii sitimaankan ayaa arbacadii isa soo muujiyey wacadna ku maray inuu sii wadi doono dagaalada.
Duqa gobolka Gedo u qaabilsan dawladda ku meel gaadhka a, Maxamed Cabdi Khaliil ayaa wargayska Somalia Report u sheegay inuu Shangole ku jiray dhawrkii masuul ee ay ku dileen dagaaladii ay al-Shabaab ku soo qaadeen Garbaharey. suurogal ma ahayn in la xaqiijiyo sheegashadaas inkasta oo ay jireen dhawaaq labada dhanba ka sooo yeedhay.
“War aan jirin ayaad dadka u sheegtay, waa ikan, waxaanan u sheegayaa adiga iyo maraykanka” ayuu yidhii Sangole, isaga o hadalkiisa sii watan wuxuu raaciyey “Adigu ima dili kartid, waxaan dhiman markii ilaahay yidhaa”.
Ilo-wareedyo gudaha ah ayaa u sheegay wargayska Somalia Report inay ugu yaraan 28 qof ay ku dhinteen magaalada ka dib markii ay dagaalyahanada al-Shabaab ku soo garaaceen magaalada madaafiic ay garab socdaan boqolaal ciidan oo dhulka ah kuwaasoo la dagaalamay ciidamada dawladda ku meel gaadhka ah oo ay is garabsanayaan urur-diimeedka qunyar socodka ah ee Ahlu Sunna isniintii.
Ilo-wareedyo ka ag dhaw xarakada Al-Shabaab eek u sugan Baardheere, koonfurta Garbaharay, ayaa laga soo xigtay ayaa xaqiijiyey in mas’uuliin sare ay al-Shabaab kaga dhinteen dagaaladaas, waxaana ka mid ahaa madaxa wacyi-galinta shacabka u qaabilsanaa gobolka oo lagu magacaabi jiray Sheekh Maxamed Maxamuud.